Indlwana Ebhishi - I-Airbnb
Boulmer, England, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Sophie
Beachside, ikotishi labadobi elinokubukwa okungaphazamiseki nokungapheli kolwandle. Itholakala edolobhaneni elidala labashushumbisi laseBoulmer. Ilungele amaholide omndeni asebenzayo kanye nokujikijelwa kwetshe kusukela ku-'Fishing Boat Inn' edumile. Indawo ekahle yokuhamba ngezinyawo ogwini lwasezulwini ukuya ezindaweni zobumnandi ezisebenzela ukudla kwasolwandle kwasendaweni. Ngicela ungithinte ngokuhlala isikhashana njengoba kungenzeka ngezikhathi ezithile zonyaka. Kucatshangelwe inja eyodwa.
I-Cottage ifakwe ngokunethezeka nangokumnandi. Kunamakamelo amathathu okulala ayisithupha ngokukhululeka. Phezulu kunegumbi lokulala eliphindwe kabili elinombhede we-kingsize kanye negumbi lokulala eliphindwe kabili. Phansi ngakwesokudla kunekamelo lokulala elikhulu elinamawele eduze kwendlu yokugezela yomndeni. Ngakwesokunxele sehholo phansi kunendawo yokuhlala/yokudlela enomlilo ovulekile nekhishi elihlome kahle.
Ingadi yangasese yangasese isakaza ububanzi bekotishi futhi igijima iqonde phansi ogwini. Ngemuva kunegceke elincane elizimele elineshede elilungele ukugcina amabhayisikili, amabhodi omzimba namabhakede namaspades.
4.80 · 99 okushiwo abanye
Isigodi sokudoba esilalayo esine-pub. Idolobhana leli iningi labantu bendawo futhi ukudoba kusaqhubeka empilweni yasendaweni. Amabhodwe ama-lobster, izintambo, ogandaganda ogwini nezikebhe zokudoba kubonakala kakhulu. Uma isikhathi esifanele ungathenga izinhlanzi ngokuqondile esikebheni.
Hlola ezinye izinketho ezise- Boulmer namaphethelo